स्वप्नदोष के हो ? यसका बारेमा रहेको मिथ्या धारणा यस्ता छन्
काठमाडौं - राति निदाएका बेला कुनै स्वप्नका कारण वा अन्य घर्षणका कारण पुरुषको लिंग बाट वीर्यस्खलन वा महिलाको योनिबाट स्राव हुनुलाई स्वप्नदोष भनिन्छ । तर स्वप्नदोषलाई प्रायः पुरुषसँग मात्रै जोडेर हेर्ने चलन छ, किनकि यो महिलाका अपेक्षा पुरुषमा अत्यधिक बढ्ता देखिन्छ । महिलामा बहिर्स्राव नहुने हुँदा उति समस्याका रुपमा पनि हेरिँदैन ।
यो प्रायः युवावस्थामा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । चिकित्साविज्ञानमा यसलाई समुचित यौनविकास भइरहेको संकेतका रुपमा लिइन्छ । स्वप्नदोष हुँदा पुरुषले कुनै केटीसँग जिस्किएको वा यौन क्रियाकलापमा लीन भएको वा केटीसँग लसपस गरेको जस्ता उत्तेजनायुक्त सपना देख्छन् ।कहिलेकाहि भने कुनै किसिमको उत्तेजनायुक्त सपना नभईकन पनि वीर्य स्खलित हुन सक्छ । सबै उत्तेजनायुक्त सपना मा स्वप्नदोष हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । युवावस्थामा बढि देखिने यस्ता सपनाहरुका कारण स्वप्नदोष हुने सम्भावना उमेर छिप्पिनुसँगै घट्दै जान्छ । स्वप्नदोषका बारेमा हामिबिच अझै पनि यस्ता केहि मिथ्या धारणाहरु रहेका छन् ।
स्वप्नदोष एक शारीरिक दोष हो
नाम स्वप्नदोष भए पनि यो कुनै दोष होइन । यो समुचित यौन विकास भइरहेको एउटा संकेत हो । किशोरावस्था देखि युवावस्थामा पुगुन्जेल अपवाद छाडेर जो कोहीले पनि स्वप्नदोष को अनुभव गरेकै हुन्छन् ।
महिलामा स्वप्नदोष हुँदैन
महिलामा पनि स्वप्नदोष हुन्छ । उनीहरुले पनि स्वप्नमा कसैसँग यौनक्रियाकलापमा मग्न भएको देख्छन् र योनिबाट चिप्लो पानी बग्नुसँगै पूर्ण आन्तरिक स्राव भएर पूर्ण सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति लिन्छन् ।
स्वप्नदोष हुनु कुनै रोग को संकेत हो
हरेक दिन हुनु वा दिनकै धेरै पटक स्वप्नदोष हुनुका पछाडी हर्मोन को सन्तुलन मा विचलन वा कुनै मानसिक समस्या को संकेत भए पनि कहिलेकाहीं स्वप्नदोष हुनु कुनै रोग होइन । यो एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।
स्वप्नदोषले कमजोरी ल्याउँछ
खाएको अन्नबाट यति रगत बन्छ र यति रगत खर्च भएर एक थोपा वीर्य बन्छ भन्ने मिथ्या धारणाले हाम्रो समाजमा जरा गाडेको छ । स्वाभाविक रुपमा कहिलेकाहीं हुने स्वप्नदोषले कुनै कमजोरी ल्याउँदैन ।
स्वप्नदोष केवल किशोरावस्था देखि युवावस्था सम्म मात्रै हुन्छ
किशोरावस्था देखि युवावस्थासम्म अत्यधिक रुपमा स्वप्नदोष हुने भए पनि प्रौढावस्थामा लागे पछि स्वप्नदोष हुँदैन भन्ने छैन । कहिलेकाहीं प्रौढावस्थामा पनि स्वप्नदोष हुन सक्छ ।
स्वप्नदोष हुनका लागि उत्तेजनाले भरिएको सपना देख्नु पर्छ
प्रायः स्वप्नदोषका लागि जिम्मेवार सपनाहरु उत्तेजनाले भरिएका हुन्छन् । तर यो जरुरी छैन । कतिपय अवस्थामा तेस्ता सपना नदेखिएका बेलामा पनि स्वप्नदोष हुन सक्छ ।
घोप्टो परेर सुत्दा बढ्ता स्वप्नदोष हुन्छ
घोप्टो परेर सुत्दा यौनांग मा घर्षण हुने सम्भावना बढी हुने भएर एसो भनिएको हुन सक्छ । तर घोप्टो परेर सुत्दा स्वप्नदोष बढ्ता भएको कुनै यथार्थ सार्वजनिक भएको छैन ।
(डा. संगीता बराल, वरिष्ठ छालारोग तथा यौनरोग विशेषज्ञसँग आधारित लेख)